Expert Semalt: Gịnị bụ Nje Virus Ngwá Agha na Olee Otú Iji Wepụ ya na aka
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ kọmputa mgbe niile, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị na ị maara Trojan virus na mmetụta ya na ngwaọrụ gị. Ọ bụ nje na-abanye na mmemme na faịlụ ndị ị na-ebudata na Ịntanetị. Ihe bụ isi nke nje a bụ na oge ọ na-abanye n'ime faịlụ gị, ọ na-ebute usoro nke ibibi ha na nzuzo. Ọ na-abịa n'ụdị ngwa bara uru, ma ọ bụ nke ọzọ na-emetụta kọmputa gị n'ụzọ dị njọ.
Ndị ọkachamara nke Semalt Digital Services, Ryan Johnson na-enye nkọwa zuru oke nke ihe Trojan Virus, ihe egwu ọ na-egosi na otú onye nwere ike iji aka wepụ ya na kọmputa. Ka anyị malite.
Àgwà nke Trojan ịnyịnya virus
Esemokwu dị iche n'etiti Trojan horse virus na mgbagwoju anya na kọmputa bụ na ekwughị na mbụ ka ọ gbasaa onwe ya. N'ihi ya, a na-ebudata nje ahụ dị ka ụgwọ ma ọ bụ faịlụ oria na weebụ. Nje virus a nwere ike ibudata malware ndị ọzọ na kọmputa gị na mgbakwunye na ozi njedebe na-ezu ohi. Kọmputa nwere ihe ndozi firewall na-enyere aka n'ịlụso nje a ọgụ, mana antivirus adịghị arụ ọrụ mgbe niile na e nwere ọnọdụ ebe ị ga - achọ iji wepụ nje ahụ.
Nzọụkwụ iji nweta maka iwepụ akwụkwọ ntuziaka
Ị nwere ike ịgbaso usoro ndị a iji wepụ Trojan horse virus site na kọmputa gị aka:
Chọpụta Trojan: mgbe ịchọta faịlụ ndị emetụta nje a, mgbe ahụ enwere ike iwepụ ya ngwa ngwa. N'ọtụtụ ọnọdụ, usoro gị ga - apụ na njehie DLL, nke a jikọtara ya na ọgụ Trojan..
Weghachite usoro weghachi ọrụ: ichefu nzọụkwụ a pụtara na kọmputa ga-eweghachite data ịhichapụ.
Malitegharịa ekwentị gị: mgbe ị malitegharịa kọmputa gị, jiri igodo ọrụ 8 iji nyere gị aka ịmalite ya na ọnọdụ nchekwa.
Gaa Wepụ ma ọ bụ Tinye Mmemme: ị ga-achọta nke a na ngalaba nchịkwa nchịkọta wee wepụ ngwa ndị oria nje virus.
Gbanyụọ ihe ndọtị: hichapụ windo nchekwa windo iji hụ na ehichapụ faịlụ niile nke usoro ihe omume.
Ozugbo i mechara ihe ndị ahụ dị n'elu, malitegharịa kọmputa gị na ọnọdụ nkịtị.
Ụzọ ọzọ iji wepụ nje gụnyere:
Ọzọ aka nke ịlụ Bibie Trojan ịnyịnya aka gụnyere nzọụkwụ nwere ike ịgụnye:
Gbaa mbọ hụ na a na-ahụ folda zoro ezo site na nhọrọ nchekwa.
Weghachite kọmputa na ọnọdụ nchedo.
Mgbe ahụ kwụsịrị usoro niile metụtara Trojan virus.
Mana iji hụ na usoro ndị a zuru oke, ị ga-edezi ndekọ ndekọ usoro.
Ihe ị ga-echeta
Iji hụ na ị kwalitela ozi data ahụ na ntanetị, ị ga-achọ ịchọta ozi na listi RUN gị.
Ọzọkwa, ozugbo ịchọta folda ahụ, ị ​​ga-ehichapụ faịlụ exe na dll ndị metụtara na aha Trojan ma mechaa, gbanyụọ uru ahụ. I kwesịkwara ikpebi nke, mmemme na-amalite na akpaghị aka mgbe ị gbanyere kọmputa gị.
Ọ dị mma, Achọrọ m enyemaka
Iwepụ Trojan Horse virus na aka bụ ihe ịma aka. Ka o sina dị, site na ngwanrọ malware ugbu a, a pụrụ iwepụ nje ahụ n'ụzọ dị irè. Plumbytes Anti-malware bụ ngwanrọ kachasị mma iji kpochapụ nje Trojan Trojan na malware ndị ọzọ na kọmputa gị Source .